पुनर्वास खबर | रेडियोबाट रिजेक्ट भएका नरेशले मिनि एफएम बनाएर चकित पारे !
रेडियोबाट रिजेक्ट भएका नरेशले मिनि एफएम बनाएर चकित पारे !
पुनर्वास खबर मङ्गलबार ३०, भदौ २०७७ १२:४५
भनिन्छ असफलता नै सफलताको आधार हो । आधा दर्जन रेडियोको प्राबिधिकबाट रिजेक्ट भएका बैतडी पाटन नगरपालिका ३ कफलीखाडका २६ बर्षिय निरेश बिकले मिनि एफएम बनाएर चकित पारेका छन् । बिकट गाउँमा जन्मिएका नरेशको परिवारको न आर्थिक स्थिती राम्रो छ नत कोहि परिवारमा शिक्षित ब्यक्ति छन् ।
सानै उमेर देखि इलेक्ट्रोनिक पार्टपुर्जा हेर्न र कसरी बन्छ भनेर मनमा खेलाई रहन्थे । कक्षा ३ पढ्थे त्यति बेला गाउमा धेरै सङ्ग रेडियो हुन्थ्यो, मामाले पनि घरमा रेडियो बनाउन्थे । रेडियो खोलेर भित्रको पार्टपुर्जा हेर्ने मन हुन्थ्यो तर मामाले खोल्न दिन्थेन्न । एक दिन घरमा रेडियो ल्याए । रेडियो खोले पार्टपुर्जा हेरे,कसरी रेडियो बज्छ भनेर सोचे त्यति बेला केही थाहा भएन तर मन कसरी बज्छ भनेर चाहिँ मन सोचिरहन्थे । गाउँमा कक्षा १० सम्म स्कुलबाट आएपछि र बिहान गाउँमा बिग्रेका एनटिना, टर्च लाईट बनाएर स्कुल खर्च चलाउन्थे । एसएलसी दिएर इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धि पढ्ने सोच थियो तर घरको आर्थिक स्थिति कमजोरले इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धि पढ्न सकेन्न । उनी महेन्द्रनगरमा आएर कम्प्युटर पढे । त्यति बेला बैतडी, डडेल्धुरामा एफएम खुलेको थाहा भयो । रेडियोको बारे बुझन उनलाई धेरै रुचि भएका कारण एफएममा जागिर गर्ने सोच थियो । तर बैतडी डडेल्धुरा कंचनपुरका धेरै एफएममा आवेदन कतै सुरुमै रिजेक्ट भए भने कतै जागिरबाटै रिजेक्ट गरियो ।
महेन्द्रनगरमा रहेको रेडियो राष्ट्रियले उनलाई एफएमको स्टुडियो बुझने मौका दियो । त्यही मौकालाई उनले समय सदुपयोग गरे । बिहान ५ बजे देखि राती ११ बजेसम्म रेडियोमा काम गर्थे । एफएमबाट आएको थोरैै पैसाले खर्च नधानिने लामो समय काम गर्न सकिन । बुबा र दाईले घर बनाउने काम गरेर आएको पैसाले परिवारको दैनिकी गुजरा चलाउदै आएका छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोरका कारण एफएमको ट्रान्समिटर बनाउन साथ पाएन्न । आर्थिक स्थिति कमजोरकै कारण बिदेश लाग्नु उनको बाध्यता भयो ।
साढे दुई बर्ष दुबईमा काम गरे तर उनको मनमा नेपालमै गर्छु भनेर उनमा अठोट बन्यो । केही बर्षअघि नेपाल फर्के । मिनि एफएम ट्रान्समिटर बनाउन रिसर्च गर्न थाले ट्रान्समिटरका पार्टपुर्जा खोज्न भारतको दिल्लीमा पुगेर ट्रान्समिटरका पार्टपुर्जा ल्याएर बनाए । ट्रान्समिटर बनाउने क्रममा उनले साउन्ड माईक बनाउने ज्ञान थपियो । गत हप्तामात्रै मिनि एफएम ट्रान्समिटरको सफलता प्राप्त गरे । उनले सात हजार खर्चमा बनाएको मिनि एफएम ८८.४ मिटरबेन्डबाट २०० मिटरटाढासम्म एफएम सुनिने गर्छ । उनि अब आधी केजि भारी उठाउने ड्रोन बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
आर्थिक स्थिती कमजोरका कारण रिसर्च गर्ने अप्ठ्यारो परेकोले स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोगका लागि उनले आग्रह गरेका छन् ।